Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Conor Coady Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Conor Coady na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, nwunye ya, umuntakiri ya, uru ya, ndu ya na ndu mmadu.
N'okwu ndị dị mfe, anyị na-ewetara gị akụkọ ndụ zuru oke nke onye na-agbachitere ya. Ihe ncheta a na - amalite site na nwata rue mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka agụụ na-agụ gị, lee foto na-egosi ọganihu ya kemgbe ọtụtụ afọ- nchịkọta doro anya nke Conor Coady's Bio.
Ee, onye ọ bụla maara (dịka na post-COVID), ọ ghọrọ olileanya nke ndị otu mba England na onye asọmpi zuru oke maka Harry Maguire. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-agụ akụkọ ndụ ya na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Conor Coady Child Story:
Maka Biography Starters, aha ya bụ Conorinho. Conor David Coady mụrụ na 25th nke February 1993 na nne ya, Gail Coady na nna, Andy Coady n'obodo St Helens na Merseyside, England.
Conor Coady Afọ Na-eto Eto:
Conorinho tolitere na-achọ ịghọ ndị nrịba ama na ihe ọ bụla ọzọ. Egwuregwu a bụ ihe ama ama n'etiti ọtụtụ ezinụlọ dị na Haydock, na Borough nke St Helens ebe o tolitere.
Ọzọkwa, ndị nne na nna Conor Coady na nwanne Harrison bụ ndị nwere mmasị na Liverpool maka oge ọ bụ nwata. N'ihi ya, ọchịchọ mbụ ya abụghị akụkọ efu.
Ezigbo Ezinụlọ Conor Coady:
Nke mbu, ndi nne na nna ya mere ka oburu oru ka ha ghara inye ya ihe obula ma obu ihe kachasi nma. N'ezie, Andy na Gail hụrụ na Conor gara ụlọ akwụkwọ mara ọkwa - ihe akaebe nke ọnọdụ mmekọrịta akụ na ụba ezinụlọ nke ezinụlọ ha.
Onye agbachitere ahụ bụ onye Bekee na-agụ bonafide site na ịmụ nwa na nnabata. N'ikwu nke a, nsonaazụ nke nyocha emere iji chọpụta mgbọrọgwụ Coady na-egosi na St Helens na-ewere ọnọdụ dị mkpa na akụkọ banyere usoro ọmụmụ ya.
Obodo nke St Helens karịsịa Haydock bụ ebe ezinụlọ Conor Coady si.
Egwuregwu bọọlụ bidoro:
Conor bụ naanị 8 afọ mgbe ọ malitere njem ya na Career football na Liverpool. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ nọ n'otu ọgbọ dị ka Raheem Sterling, Jon Flanagan na Andre Wisdom. Nke a bụ foto dị obere nke onye agbachitere n'oge ntorobịa ya.
N'ibuli elu nke Reds, onye na-eto eto nwere ohere ịmụta site na kpakpando ndị ama ama nke Reds dị ka Gerrard Carragher na Rigobert Song. Ọ gwara ExpressAndStar n'otu oge na nyochaa:
“Gerrard na Carragher nwere mmetụta 100% na ọrụ m. Enwere m ihe ùgwù nke ikiri ka ha na-egwuri egwu, soro ha na-azụ ma na-eso ha. ”
Conor Coady Biography- Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'elu ọrụ ya na The Reds, onye na-agbachitere onye na-eto eto mere mmalite ya n'oge egwuregwu Europa League megide Anzhi Makhachkala na 2012.
N'oge na-adịghị anya, ọ malitere Premier League mbụ megide Fulham na 2013 tupu ya ekwenye na ndenye ego ya na Sheffield United nke Njikọ Otu.
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ mgbazinye ya na Sheffield, Coady mgbe ọ kpọtụụrụ ndị ezinụlọ ya kpebiri na oge eruola ịhapụ Liverpool.
Eziokwu bụ, ọ maara na ọ ga-esiri ike ịnweta otu n'ime ndị otu Red mbụ, enweghị ekele maka ọdọ mmiri dị ugbu a nke onyinye nchebe - ihe atụ bụ Dejan Lovern wdg. N'adịghị Joe Gomez, onye na-agbachitere ogbenye hapụrụ n'ihi na ọ ga-enwe ihe ịga nke ọma na Liverpool.
Conor Coady's Bio - Nbilite Iji Mara Aha:
N'ihi ya, ọ dịrị ya mfe isonyere Huddersfield na 2014 maka ego mbufe nke £ 500,000. N'oge na-adịghị anya tupu ọ kwaga Wolverhampton Wanderers na 2015 na n'ikpeazụ hụ wolves nwetara nkwalite na Premier League n'oge oge 2017-18.
Ọsọ ọsọ gaa n'oge edere akụkọ ndụ a, Conor Coady enweela ịrị elu meteoric kemgbe ọ hapụrụ Liverpool. Onye na-agbachitere ya bụ onye otu Wolves guzobere.
Na mgbakwunye, ọ nwetara oku mbụ ya na England National Squad n'oge na-adịbeghị anya Gareth Southgate na-achọ ime ya ka o buru olile-anya nke nchekwa obodo ahụ.
Zọ ọ bụla ọ dịịrị ya, anyị nwere nchekwube na ọ ga-adị mma. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Zute Conor Coady nwunye na Childrenmụaka:
Enwere ndị egwuregwu ole na ole nke Wolverhampton nke nwere ike ịnya isi na nwunye na ụmụaka. Centre azụ bụ otu n'ime ha. Nwunye Conor Coady na-akpọ Amie. Ọ bụ blondie onye na-agbachitere na-etinye oge ọ bụla pụrụ iche nke ndụ ya.
Ọ na-akpọrọ ya ezumike ma kwụsịkwa ịbụ abụ nke nkwado na-enweghị atụ ọ na-akwado ya na ọrụ ya.
Agbanyeghi na enweghi ndekọ nke oge di na nwunye malitere ịlụ ma ọ bụ kwekọrịta nkwa, anyị maara na njikọ ha mere ka amụọ ụmụ nwoke 3. Ha gụnyere Henri, Freddie na Louie.
Lee Conor Coady ya na nwunye ya na umuaka ya.
Ndụ Ezinụlọ Conor Coady:
Mgbe ọ bụla a jụrụ etiti etiti ka ọ depụta aha ndị dị ya nso, anyị nwere ike ịkọwa aha atọ mbụ ọ ga-akpọ.
Ha bụ ndị ezinụlọ ya. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna na ụmụnne Conor Coady. Ọzọkwa, eziokwu banyere ndị ikwu ya ga-abụ isiokwu a ga-atụle ebe a.
Banyere Conor Coady Nna:
Andy bụ aha nna nna ya. Coady na-ele ya anya dị ka onye na-akpali akpali na ndụ ya na ọrụ ya. Ọ kpọtara onye na-agbachitere ebe niile mgbe ọ bụ nwata, ọ dịbeghị anya site na kpakpando bọlbụ toro eto.
N'ezie, Andy anaghị echefu egwuregwu nwa ya nwoke ka ọ na-aga ebe niile iji lelee ya ka ọ na-egwu bọlbụ na ụlọ.
Banyere Conor Coady Nne:
Gail bụ aha nne nne na-agba bọọlụ. Ọ bụ onye nwere mmasị na Wolverhampton n'ihi na nwa ya nwoke na-azụ ahịa ya na Wolves.
Anyị nwere ike gwụsị ibe na-ekwu maka otu o si zụlite Coady site n'oge ọ bụ nwata mee ka ọ bụrụ nwoke ahụ taa. Agbanyeghị, anyị kwenyere na ị ga-ebugharị ma ị gaghị ala azụ ikele Gail maka ihe o mere ma mee ma ọ bụrụ na ụzọ gị agafe.
Banyere ụmụnne nwanne Conor Coady:
Nwoke Bekee nwere otu nwanne nwoke a maara dị ka Harrison. Coady kwadoro Harrison maka inye ya nkwado dị egwu dịka nna ya.
N'ezie, ọ gafere oke obi abụọ ezi uche na ụmụnne nwoke nwere nkekọ chiri anya ma nwetaghachi ibe ha.
Nwere ike ịhụ nwanne nwanne Conor Coady na ogbugba a?
Banyere ndị Conor Coady:
Ewezuga ezinụlọ nke etiti etiti, enweghị ndekọ banyere nna nna ya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ndekọ banyere nne na nna nna ya abụghị ihe dị adị. Onweghi ihe omuma banyere umu nne nna ya, nwanne nne ya, nwanne nna ya, umu nwanne ya na umu nne ya.
Ndụ nke Conor Coady:
Ka anyị kwuo banyere onye etiti etiti dị n'èzí na-ahụ na onye na-eche nche ya anaghị arụ ọrụ nke ọma. Ọdịmma nke omume ya bụ nke ndị ezinụlọ kacha mara nke ọma na ndị ya na ha na-akpachi anya bụ ndị na-egosi ịdị jụụ na mkpokọta okike.
Ọzọkwa, Coady bụ onye ndu ndu na ọnụnọ na-akpali akpali ebe ọ bụla ọ na-aga. Ọ bụ naanị ihe ole na ole ọ hụrụ n'anya mgbe football gachara. Ihe ndị a gụnyere igwu egwuregwu vidio, ime njem na iso ezinụlọ ya na ndị enyi ya nọrịa.
Ndụ Conor Coady:
Banyere otu kpakpando bọọlụ si enweta ego ya, ọ bụ ihe ọmụma zuru oke na bọọlụ bụ egwuregwu na-enye ezigbo ego. N'ezie, PSG kpakpando Kylian Mbappe ozugbo kwuru na enwere "ego nzuzu n'egwuregwu ahụ".
N'ihi ya, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na Coady na-enweta £ 55,000 kwa izu. N'ikwu nke a, nkwụghachi ụgwọ ụlọ kwa afọ nke £ 2,864,400 na-egosi na ọnụọgụ ego ya ruru £ 3.5.
N'inwe akụ na ụba dị oke mkpa, ọ bụ ihe dị mma ịhụ Coady na-ebugharị na Audi. N'ikwu nke a, o nwere onye isi ụlọ kwesịrị ekwesị na Wolverhampton, niile na-ekele maka ego na-adịghị mma na nkwenye ndị na-abịa n'ụgbọ elu elu.
Anyị gwara gị na ọ nwere Audi, ọ bụghị anyị?
Eziokwu banyere Conor Coady:
Iji mechie akụkọ ndụ a na-adọrọ mmasị nke onye na-agbachitere ya, lee akụkọ dị ntakịrị ma ọ bụ nke amaghị banyere ya.
Eziokwu # 1 - Nkwụnye ụgwọ ọnwa na ego kwa nkeji:
Kwa Afọ £ 2,864,400
kwa ọnwa £ 238,700
Kwa Izu £ 55,000
Kwa .bọchị £ 7,857
Kwa elekere £ 327
Kwa Nkeji £ 5.45
Sekọnd £ 0.09
Nke a bụ ihe Coady akwụgoro kemgbe ị malitere ilele Bio ya.
Eziokwu # 2 - FIFA 2020 Fim:
Onye bọọlụ bọọlụ Britain nwere ogo 79 n’ogologo nwere ikike nke 81. Eziokwu bụ, nke ahụ dị ntakịrị maka onye a na-ewere dịka olile anya nchekwa nke bekee.
N'ezie, Conor Coady's Premier League profaịlụ na-ekwu okwu banyere ịdị mma ya. Olileanya, FIFA ga-agaghachị ọnụ ọgụgụ ahụ ma mee ka ha gosipụta eziokwu.
Eziokwu # 3 - Okpukpe Conor Coady:
Wolves Skipper bụ onye kwere ekwe na Onye Kraịst, n'agbanyeghị na anyị enweghị ntụle ma ọ bụ ihe akaebe na-egosi nke ahụ. Oh chere obere oge, nwanne ya nwoke aha ya bụ Harrison. N'ikwu nke a, nne na nna Conor Coady mere ka ọ bụrụ aha nna ya bụ David- aha ndị Kraịst. Nke ahụ ezuru maka ngosipụta.
Daalụ maka ịgụ nke a na-ede banyere akụkọ ndụ Conor Coady. Anyị nwere olile anya na ọ nyere gị mmụọ nsọ na nkwado ezinụlọ na-enyere ndị mmadụ n'otu n'otu aka inwe ọganihu.
Were otu ihe atụ sitere na ezinụlọ Coady ndị na-eso ya ebe ọ bụla ọ na-aga. Ha bụ ndị Reds mgbe etiti etiti ya na Liverpool wee bụrụ Wolves mgbe ọ banyere Wolverhampton.
Tụkwasị na nke a, ọ dị anyị mkpa ịja ndị nne na nna Conor Coady mma maka nguzosi ike ha n'ịkwalite ọdịmma ya. N'ezie, ha anaghị enweta nkwado ha n'ọtụtụ ezinụlọ.
Aha n'uju Conor David Coady
aha otutu Conorinho
Ụbọchị ọmụmụ Thbọchị 25 nke Mach 1993
Ebe amụrụ onye St Helens na Merseyside, England.
Egwuregwu Dender / Center azụ
Ndị nne na nna Gail na nna ya, Andy.
Children Henri, Freddie na Louie
Ngwakọta Net £ 3.5 nde
omume ntụrụndụ Na-egwu egwuregwu vidio, na-eme njem ma soro ezigbo ezinụlọ ya na ndị enyi ya nọrịa.
elu 6 etskwụ, 1 Inch
Na lifebogger, anyị na-anya isi n'ikwe akụkọ nwata na akụkọ ndụ ya na izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya na ndụ anyị nke Conor Coady, Biko mee ka anyị mara. Ma ọ bụghị ya, tinye okwu na-agwa anyị ihe ị chere banyere Onye na-agbachitere ya.